Mascherano oo sheegay halka xigta uu Messi aadi karo kaddib marka uu ka tago Barcelona – Gool FM
Mascherano oo sheegay halka xigta uu Messi aadi karo kaddib marka uu ka tago Barcelona
(Yurub) 29 Dis 2020. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka Argentinaa ee Javier Mascherano ayaa xaqiijiyay in xiddiga ay isku wadanka ka soo wadajeedaan ee Lionel Messi uu horey u muujiyay rabitaankiisa ku aadan ka ciyaarista dalkiisa hooyo ee Argentina.
Albaabka ayaa wali u furan rajooyinka laga qabo tallaabada xigta ee Lionel Messi kaddib dhamaadka xilli ciyaareedkiisa haatan ee kooxda Barcelona, maadaama uu muujiyay rabitaankiisa ah inuu baxo si uu u tijaabiyo tartan cusub, waxaana xulashooyinka kooxaha uu aadi karo ka mid ah naadiga reer Argantina ee Newell’s Old Boys.
Haddaba Wargeyska “Sport” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu dhawaantan bixiyay Javier Mascherano, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Messi wuxuu marwalba muujiyaa rabitaankiisa ah inuu ka ciyaaro Argentina, waa inaan aragnaa sida ay xaalladu noqon doonto.”
Intaas kaddib Javier Mascherano ayaa ka hadlay talaabada xigta uu qaadi doono kaddib markii uu ku dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka fariistay ciyaarista kubadda cagta, wuxuuna yiri:
“Waxaan go’aansaday inaan ciyaaraha ka fariisto kaddib ciyaartii Argentina. Waxaan doonayay inaan qaab kale uga fariisto, laakiin ma dooran karno dhamaadka.”
“Waxaan doonayaa inaan isku dayo inaan noqdo tababare.”
Si kastaba ha noqotee, Mascherano ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubadda cagta bishii la soo dhaafay kaddib markii uu waayo qurux badan la soo qaatay kooxihii uu soo matalay, sida Barcelona iyo Liverpool, sidoo kale xulka qaranka Argentina.
Muxuu ka yiri tababare Frank Lampard barbarihii ay kooxdiisa Chelsea la gashay Aston Villa??
RASMI: Kooxda Paris Saint-Germain oo ugu dambeyn xaqiijisay inay cayrisay tababaraheedii Thomas Tuchel